AIFM MADAGASIKARA: Nisafidy ny hiara-paly tamin’ireo zazalahy ao amin’ny Akany Avoko Bevalala | Journal Madagascar
Ankizy tandindon-doza. Nanolotra sakafo mafana, zava-pisotro, boky fianarana mamaky teny sy manoratra, boky fianarana kabary ho an’ireo zazalahy taizana ao amin’ny Akany Avoko Bevalala ny AIFM (Alliance Internationale des Femmes de France et Madagascar) sampana Madagasikara ny 21 desambra 2021. Efa fanaon’ity fikambanam-behivavy ity ny hetsika ara-tsosialy tahaka izao. Nisafidy ny hizara ny mamy sy hiara-paly amin’ny Akany Avoko Bevalala ny fikambanana noho ny fetin’ny noely sy ny fetin’ny faran’ny taona. Efa miara-miasa amin’ny akany Avoko Ambohidratrimo rahateo ny fikambanana ka notohizana izany. “Ankoatra ny fiaraha-misakafo dia nisy ny fanentanana hiatrika ny Noely tamin’ny alalan’ny fampiatsiahavina, fizarana hafatra sy fampianarana momba izany andro malaza hahatsiarovana sy hanavaozana indray ny famonjena natao sy nentin’i Kristy ho an’ny zanak’olombelona”, hoy ny filohan’ny AIFM Madagasikara, Rasendralalao Hantanoro. 12 ny isan’ireo boky nomena ary misy tantara sy angano amin’ny teny malagasy sy frantsay. Avy amin’ny tranom-boky “Café Cannelle”, an’ny sekretera jeneralin’ny fikambanana Andriamamonjy Stella ihany, ireo boky fianarana mamaky teny sy manoratra. Nosoratana sy novokarin’i Andrianasolo Hajaina, filohan’ny Havatsa-Upem sady filoham-boninahitry ny AIFM kosa ireo boky fianarana kabary. Nanampy tamin’ny fanatontosana ny hetsika ny AIFM any Frantsa izay tarihin-dRamatoa Ranaivo Francine.
Mbola tsy ampy taona avokoa
Ny taona 2017 no nitsangana ny Akany Avoko Bevalala, araka ny fanazavan’ny tomponandraikitra teny an-toerana. “Nitambatra teny amin’ny akany Avoko Ambohidratrimo avokoa ny ankizilahy sy ny ankizivavy. Noho ny antony amin’ny resaka fitaizana dia natokana ny ankizilahy”. Ankizy tandindon-doza no taizana ao amin’ny Akany. Misy amin’ireo zazalahy taizana eny no efa notaizana tao amin’ny akany Avoko Ambohidratrimo tamin’ny mbola kely ary tsy hita mihitsy ny ray aman-dreny dia nafindra eny Bevalala. Ahitana ankizilahy niharan’ny herisetra ara-nofo ihany koa ao. 34 ny fitambaran’ny ankizilahy taizana ao Bevalala amin’izao fotoana izao. Mbola tsy ampy taona avokoa izy ireo.